ओली, राम मन्दिर, पशुपतिनाथ र नारायणहिटीबीचको कनेक्सन ओली, राम मन्दिर, पशुपतिनाथ र नारायणहिटीबीचको कनेक्सन Canada Nepal
ओली, राम मन्दिर, पशुपतिनाथ र नारायणहिटीबीचको कनेक्सन
माघ १९ २०७७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही माघ २३ गते नारायणहिटी दरबार अगाडि आमसभा गर्ने भएपछि विभिन्न तर्कहरु भइरहेका छन् ।
दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीलाई जोखिममा पारेको स्वयं सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले आरोप लगाउँदै विरोध सभा गर्दै हिँडेको छ ।
यसैको शिलशिलाअनुसार यही माघ ९ गते शुक्रबार प्रदर्शनीमार्गमा सो समूहले आमसभा गरेको थियो, जसलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनको रुपमा हेरिएको थियो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनलाई जवाफ दिने गरी अर्थात आमसभा भनेको के हो भनेर जान्न माघ २३ गते आफूले गर्न लागेको सभालाई हेर्न ओलीले सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरे । योसँगै विपक्षीको सभालाई काउन्टर दिन सरकार पक्ष सडकमा ओर्लिएको स्पष्ट भयो ।
यसअघि बहुदल आएपछि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विपक्षीमात्रै सडकमा ओर्लिएका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्म सडकमा ओर्लिएनन् । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री ओली स्वयं देशभर सभामा गर्दै हिँडिरहेका छन् ।
यसरी हिँड्दा उनले हिन्दु धर्म र संस्कृतिबारे पनि व्याख्या गरेको सुनिन्छ । गत भदौ २९ गते भानुजयन्तीका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले अयोध्या नेपालमा रहेको अभिव्यक्ति मात्रै दिएनन्, अहिले पर्साको ठोरीमा राममन्दिर बनाउने उद्घोष पनि गरेका छन् । भदौ २९ गतेबाट हिन्दु धर्मबारे अभिव्यक्ति दिन थालेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न लागेको आरोप लागिरहेको छ ।
हिन्दु राष्ट्र र नायणहिटी र ओलीबीच कस्तो छ कनेक्सन ?
एकपछि अर्काे हिन्दु राष्ट्रबारे अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजनीतिक उपलब्धीका रुपमा रहेका संघीयतासहित खारेज गरेर मुलुकमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली, उनको सरकार र ओली समूहले यसलाई बारम्बार खण्डन गर्दै मौजुदा शासकीय व्यवस्थासहित संविधान विपरीत नजाने बताइरहेको छ ।
तर, उनको कथनीविपरीत करनी रहेको भन्दै कतिपयले आशंका उब्जाएका छन् । गत भदौमा अयोध्या नेपालमै रहेको अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पर्साको ठोरीमा राम मन्दिर बनाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
यसपछि हालै पशुपतिनाथको दर्शन गरेर उनले गणतान्त्रिक सरकारको र कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथ पुगेको रेकर्ड बनाए । गत सोमबार (माघ १२) पत्नी राधिका शाक्यसहित पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्नका लागि ३० करोड रुपैयाँ निकासा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आदेश दिए ।
पशुपतिनाथलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ‘३० करोड’ भेटी
यसले थप आशंका उब्जायो । केही समय अघि भारतीय सञ्चार माध्यमहरुलाई अन्तर्वार्ता दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वीय दर्शन र हिन्दु धर्मको महत्वबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
यसैक्रममा उनले आमसभा गर्ने स्थान ‘नारायणहिटी दरबार’ अगाडिको ठाउँ किन रोजे ? भन्ने आमजिज्ञास भइरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल सुमूहका नेताहरुले सो सभाबाट ओलीले हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न लागेको सुनेको बताएका छन् ।
‘माघ २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने’
यही माघ २३ गते नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको छेउमा बनाएको मञ्चबाट ओलीले महेन्द्रको सालिकतिर फर्किएर गर्ने भाषणबाट के घोषणा हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बलियो र फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने सभाको ठाउँ नारायणहिटी दरबार अगाडिको स्थान नै किन रोजियो ? यसबारे कसैले केही बताइसकेका छैनन् ।
नारायणहिटी दरबार अगाडि सरकार तथा शासकको विपक्षमा हुने आन्दोलन हुने गरेमा अहिले स्वयं सरकार नै सोही स्थानमा गएर आमसभाको नाममा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको पहिलोपटक हो । मुलुकको सम्पूर्ण शक्तिबाहक सरकार नै सडकमा शक्ति प्रदर्शनलाई रहस्यमय ठानिएको छ ।
तर, अन्यत्र स्थान नभएका कारण सो स्थान रोजेको केही ओली समूहका नेताहरुले बताएको पनि सुनिन्छ । तर, यसलाई धेरै पत्याइहालेका छैनन् ।
माघ १९, २०७७ सोमवार १९:०४:२४ बजे : प्रकाशित